तपाईले सोध्नु भएको विषय यही हो
Tara Robinson मा जुन 27, 2016 द्वारा लिखित।
एक संस्थापक सदस्यसँगको वार्तालापले एक नयाँ सदस्य-संचालित काउन्सिलले Lending Circles कार्यक्रममा योगदान पुर्‍याउने चित्रको रंग दिन्छ।
यो वास्तविक राख्ने बारेमा हो। जब हामी बढ्छौं र विकसित हुँदै जान्छौं, हामी जान्दछौं कि संलग्न व्यक्तिहरू नै ब्यबहार स gathering्कलनको लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् जसले कार्यक्रम र उत्पादनहरूलाई सुधार र सूचित गर्दछ। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै हामी यस वर्षको सुरुमा हाम्रो पहिलो सदस्य सल्लाहकार काउन्सिल (म्याक) गठन गर्ने योजना गरेका छौं।
गोल? हाम्रो प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्ने ग्राहकहरू बीचको संवादलाई प्रोत्साहित गर्न र उनीहरूको अनुभवहरूलाई नजिकबाट हेर्न। सदस्य सल्लाहकार काउन्सिलले नयाँ कार्यक्रम, ग्राहकको अनुभव, र हाम्रो रणनीतिक लक्ष्यहरू आकार दिन सहयोग गर्दछ।
गत महिना सदस्य सल्लाहकार काउन्सिल, हाम्रा clients ग्राहकहरु (एरफ सदस्यहरू) बाट बनेको थियो जुन हाम्रो समुदायको विविधता प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी ती मध्ये कुनै एक सदस्यलाई चिन्न बस्यौं, सान्तोस, र सुन्न को लागी म्याक उनको लागी के हो।
हामीलाई आफ्नो बारेमा थोरै बताउनुहोस्:
म जिल्ला of को मुटुमा हुर्कें, जसलाई "ला मिशन" भनेर चिनिन्छ, २ 26 औं र भ्यालेन्सिया स्ट्रिट्समा, जहाँ चौराहोंले मलाई बढेको देख्यो र म अब को हुँ। ला मिशनमा हुर्कदै गर्दा यसले मलाई परिप्रेक्ष्यमा पुर्‍यायो जुन तपाईं सान फ्रान्सिस्कोमा अन्य जिल्लाहरूमा हेर्न वा अनुभव पाउन सक्नुहुन्न। ला मिशन संसारको हरेक कुनामा संस्कृतिले भरिएको छ। हामीसँग स्थानीयहरू छन् जुन धेरै प्रस्ट छन्, जुन अन्याय विरुद्ध बोल्न डराउँदैनन्।
तिमी जीवन निर्वाह गर्न के काम गर्छौं?
केही ला मिशन आदर्शका साथ हुर्किएर, म मेरो समुदायको लागि केहि गर्न चाहान्छु, केहि सिकाउन सक्छ - वा हामी कसरी खाडीमा भन्छौं, "केहि खेल बोल्नुहोस्" - युवा पुस्तालाई। त्यसैले मैले खाडी क्षेत्र शहरी डिबेट लिगको लागि काम गर्न सुरु गरें। सैन फ्रान्सिस्कोको क्षेत्रीय संयोजकको रूपमा, म लिगले यहाँ स्यान फ्रान्सिस्कोमा भएका सबै कार्यक्रमहरूको जिम्मेवार छु। म मुख्यतया हाई स्कूलहरू जस्तै मिशन हाई स्कूल, वालेनबर्ग हाई स्कूल, डाउनटाउन हाई स्कूल, जून जोर्डन स्कूल फर इक्विटी, र इडा बी वेल्स हाई स्कूलको साथ काम गर्दछु।
तपाईं किन Lending Circles कार्यक्रममा सामिल हुनुभयो?
म लेन्डि C सर्कलमा सामेल भएँ किनकि मेरी आमाले सोच्नुभयो कि यो केही क्रेडिट उत्पादन शुरू गर्नु राम्रो तरिका हो। सुरुमा म शंका थियो। मलाई थाहा थियो टाँडा के हो तर ती कहिलेकाँही स्केचि हुन्थे र सँधै राम्रो काम गर्दैनथे। २०१ 2016 मा छिटो अगाडि र मैले or वा 1 Lending Circles गरेको छ।
चीजहरू मध्ये एउटा जुन म Lending Circles का सब भन्दा मजा लिन्छु तपाईले लिनु पर्ने फाइनान्स क्लास। यो तपाईको लेन्डि C सर्कलमा सम्मिलित हुँदा प्रत्येक पटक कक्षा लिनु आवश्यक हुन्छ। वित्तीय शिक्षाको निरन्तर सुदृढीकरण महत्वपूर्ण छ। मैले त्यो स्थिर रिमाइन्डरबाट धेरै सिकेको छु। म कार्यक्रममा मानिसहरूलाई सामेल गराउन निरन्तर कोसिस गर्दैछु। म प्राय: तिनीहरूलाई वेबसाइट देखाउँछु र उनीहरूलाई मेरो कथाको एक सानो कुरा भन्छु।
जब तपाईले म्याकको बारेमा थाहा पाउनु भयो भने तपाईको प्रतिक्रिया कस्तो थियो?
जब मलाई कल आयो, मलाई कसरी प्रतिक्रिया दिने थाहा थिएन। म मेरो बिल्डिंगको कौसीमा हुँदा फोन आयो। कल हावाको हावाको रूपमा आए, यो देजा vu जस्तै थियो। जब मैले कार्लालाई म्याक सदस्यहरूको पहिलो समूहको हिस्सा बन्ने कुरा गरे, यो कुनै दिमागमा थिएन र मैले तुरुन्तै हो भने।
म्याकको कुन अंश तपाईलाई सबैभन्दा रमाईलो छ?
मेरोलागि साँच्चिकै चाखलाग्दो कुरा भनेको यो हो कि तपाईं समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईले ती मानिसहरुको लागि बोल्न सक्नुहुन्छ जुन सुन्न सकिदैन। यो त्यस्तो शक्ति हो जुन सबैले महसुस गर्न सक्दैन। म्याक सदस्यहरूले लिने निर्णयहरूले समुदायलाई असर गर्ने छ र त्यो कुरा नै मेरो ध्यान हो।
म अनुभव पाउन र समुदायको लागि एक सीधा निर्णय निर्माता बन्ने तथ्य मेरो सपना भन्दा परेको छ। सात अन्य सदस्यहरूको साथ हामी हाम्रो समुदायलाई अझ राम्रो बनाउन सक्छौं। म्याक सदस्यहरूको पहिलो पुस्ताले अर्को पुस्ताको लागि मापदण्डहरू सेट गर्नेछ र त्यस्तै हामी समुदायलाई प्राथमिकता दिने एउटा समूह निर्माण गर्नेछौं।
म्याकको अर्को बैठक अगस्ट 3rd को लागि निर्धारित छ जहाँ समूह आउँदै गरेको वर्षको लागि आफ्नो लक्ष्यहरू छलफल गर्न अगाडि देखिन्छ।